Manazava ny Semalt Expert Amin'ny Finday Voice - Impakt amin'ny SEO
Ireo endri-pitenenana momba ny feo dia manana fiantraikany amin'ny fikarohana ny fanamafisana ny môtera fa mitohyhampitombo ny lanjany mandritra ny taona. Voalaza fa manohy ny fahaleovan-tena amin'ny vahoaka ny fangatahana feo raha ampitahaina amin'ny bokyfanoratana fanontaniana eo amin'ny boaty fikarohana smartphone.
Artem Abgarian, Tale Mpitarika Success Success an'ny Semalt Digital Services, dia mamaritra ny fikarohana ny feo ary ny maha-zava-dehibe ny fahombiazan'ny SEO.
Inona no fikarohana lalina?
Ny fehezam-baiko amin'ny fitaovana iray amin'ny fanantenana hahazo valiny dia feofikarohana. Maro ireo orinasam-peo teknolojia avo lenta no manohy mampiditra endri-tsarimihetsika voamarik'ireo feo amin'ny fitaovany. Ohatra amin'izany ny hoe "Ok,Google "ho an'ny Google," Siri "miaraka amin'ny fitaovana Apple," Cortana "avy amin'i Microsoft," Alexa "ao Amazon, ary" Bixby "ho an'ny Samsung - commercial appraisal company.
Mihoatra ny antsasaky ny totalin'ny Google mikaroka amin'ny smartphones. Avy anyIreo, roapolo isan-jaton'izy ireo dia mamerina miverina amin'ny feon'gazety feo raha tsy misy mpampiasa mifandray amin'ny sehatra. Amin'izao fotoana izao, ny fitadiavana ny feo dia manakaiky ny dimy amby roapoloisan-jaton'ny teny Anglisy, manome azy ireo marina kokoa. Raha jerena amin'ny findings Google, dia mitovy amin'ny fanamarihan'ny olona izanymarina.
Ny antony mahatonga ny olona ho malaza dia ny fampiasana fampiasa amin'ny finday nomerikampanelanelana amin'ny rindrankajy kely. Ohatra, ny solontenan'i Amazon Echo sy Alexa ao an-tokantrano Google dia miankina amin'ny fangatahana sy ny baiko am-bava..izy ireodia samy mahafinaritra sy mahasoa, izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny mpiserasera ho toy ny fanangonana biby an-trano tahaka ny voajanahary kokoa.
Ny fikarohana voalazan'ny fifanakalozan-kevitra dia anisan'ireo fironana manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny moteramiaraka amin'ny 70 isan-jaton'ny fikarohana rehetra misy fiteny natoraly. Miresaka amin'ny fitaovana finday nomerika ny olona araka izay tianyMametraha fanontaniana mifandraika amin'ny olon-kafa.
Fahamarinana voamarika momba ny Google Search
Google dia manohy ny dingana lehibe amin'ny fitadiavana fifanakalozan-kevitra, miforonafandikana ny feo, ary mamaly fanontaniana. Mianatra mamantatra sy mandika ny teny ampiasain'ny olona izy mba hampiharihary ny fikasan'ny mpampiasaary hamoaka ny vokatra tsara indrindra.
Ohatra, raha ny trangan'i Google dia misy fanontaniana telo mitovy amin'izanymomba ny toerana hividianana kiraro, tokony hanitsy ny valin'ny fikaroham-piteniny izy raha mifototra amin'ny lanjan'ny mpanjifa. "Aiza no hividianako kiraro?" dia zava-marinafangatahana. "Aiza no hividianako kiraro"? "Aiza no hividianana kiraro" dia fitovian'ny hevitra sy ny zava-misy, ka mahatonga ny tsy fandriam-pahalemanany matoanteny izay maneho fikasana. Ireo fahasamihafana ireo dia manondro fa ny fiovaovana, ny fikasana ao ambadikin'ny fiovana tsirairay, ary ny fahafahana manompo manokanaNy valiny dia misy fiantraikany lehibe amin'ny dikan'ny Google amin'ny fikarohana.
Namaly valiny tsotra i Google amin'ny tranga hafa. Ny tanjon'i Googledia natao ho toy ny fivarotana tokotokony mba hamerenana ny valiny ary hitarihana ny mpiserasera amin'ny pejy marina misy ny vaovao nangonina. Mitovy amin'izanymanome valiny faratampony, izay no ataon'i Siri na Alexa rehefa manontany azy ny mpampiasa azy.
Manamarika ireo marika sy ny tranonkala e-commerce fa misy ny fandrahonana goavana ny karatra valinyamin'ny habetsaky ny fifamoivoizana amin'ny tranokala iray sy ny taham-pifandraisana. Mety ho marina izany, fa ny karatra valiny dia eto mba hijanona ary ny safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa,dia ny hifaninana mba handresena azy ireo na mety ho tratran'ny mpifaninana aminy.